U-Ex-lover u-Ksenia Borodina wabika ngomshado oseduze, ividiyo
Ngesikhathi uKsenia Borodina noKurban Omarov beqhubeka behlaziya umphakathi we-Internet ngokuhlukanisa, ngaphandle kokuphawula izindaba zakamuva, lowo owayengumhleli wethelevishini owakuthandayo wenza isitatimende esingalindelekile.
Ezinsukwini eziyisithupha nje kuphela, uMikhail Teryokhin ... ukushada. Kunoma yikuphi, lowo owayengumhlanganyeli wangempela ubonisa ukuthi "u-Dom-2" usho lokhu ekukhulumisaneni, ividiyo ayifake kwi-microblog yakhe.
Kule vidiyo evele ku-Instagram kaMichael Terekhin, lo mbiko ubika ngokujulile ukuthi ngoJuni 27 uzoshada. Kulokhu, lowo owayengumthandi we-Xenia Borodina wenqaba ukudalula noma iyiphi imininingwane yomshado ozayo, athembisa ukuthi konke kuzokwaziswa ngosuku oluvunyelwene ngalo.
Abathandi bakaMichael Teryokhin basikisela ukuthi lowo owayengumthandi u-Xenia Borodina uzohlanganyela kulo mdlalo "Bachelor"
Akubona bonke ababhalisile be-Instagram Michael Terekhin bakholelwa ukuthi unqume ngempela ukushada. Naphezu kokuthi ekupheleni konyaka odlule kwakukhona inkulumo eyabuyisana nayo nomkakhe, u-Christina, abakhohlisayo bakholelwa ukuthi izindaba zakamuva zinezinhlobo ezithile zobuqili obungcolile.
Esinye sezindinganiso ezithandwayo kakhulu ukuthi lowo owayengumthandi kaKsenia Borodina Mikhail Teryokhin uzoba yiqhawe lesikhathi esisha sombukiso weqiniso "Bach".
Izinkanyezi zaseRashiya ngoMeyi 9 zenze isenzo "Immortal Regiment" ku-Instagram
U-Anastasia Volochkova uthukuthelise abhalisile be-Instagram ngokuziqhenya kwakhe
Fuuuu! U-Timati washaqa isithombe ngezidumbu ezibulalayo
UTina Kandelaki osemncane wazama ukufihla iminyaka yakhe
UVera Brezhnev wakhuluma okokuqala ngomntwana waseMaladze
I-cheesecake ene-cocoa enomphefumulo
Ukunakekelwa kwezinwele esikhathini esibandayo
Umhluzi wemifino ku-boiler kabili
Yini ongayinika umama nobaba u-New Year 2017, isoka noma intombi ethandekayo, umkhwekazi, intombi, othisha. Imibono engcono kakhulu yezipho zonyaka omusha kubazali, emndenini, emadodeni
Jam from iplamu ephuzi ne-zucchini enanini ye-ananas
Ungakuhlangabezana kanjani nezivakashi ezingahambelwanga?
Ukukhanyisa amathiphu ezinwele -izithombe, amagama kanye nezici zohokotela
Isipho kumfazi onesizungu
Ukuthuthukiswa ngokomzimba kwengane ezinyangeni ezingu-4
Isobho sekhisi ukhilimu nge-broccoli
Isobho nge-garlic ebisikiwe, utamatisi noshizi